को हुन् यी युवा ? जसले रबिलाइ लागेको आरोपको गरे कसैले नसोचेको डरलाग्दो खुलासा (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
को हुन् यी युवा ? जसले रबिलाइ लागेको आरोपको गरे कसैले नसोचेको डरलाग्दो खुलासा (भिडियो सहित)
चितवन । भरतपुरमा आज विहानै देखि रवि लामिछानेका समर्थकहरुले प्रर्दशन गरेपछि झडप भएको छ । प्रर्दशनकारीले प्रहरीको मोबाइल गस्तीको गाडी तोडफोड गरेपछि झडप भएको छ । प्रर्दशनकारीलाई तितरवितर पार्न प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको छ । सो क्रममा प्रहरीले चार राउण्ड अश्रुग्याँस समेत प्रहार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा ठूलो संंङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
रवि लामिछानेसहित ३ जनालाई जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरेपछि प्रदर्शनकारी थप आक्रोसीत बनेका थिए । उनिहरु रविलाई रिहा नगरेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडीको क्षेत्रबाट नहट््ने भन्दै साँझपख पनि नारा लगाउदै बसेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाही आज चितवन आएपछि जनसागर उर्लिएको छ । साथै रमेश प्रसाईले रबि लामिछानेलाइ प्रहरी कार्यालय भित्र आज भेट गर्नुभयो । त्यस्तै रबि लामिछानेको समर्थकले एक डरलाग्दो खुलासा गरेका छन् तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।